Uhlobo lweendevu ngokobuso bakho, ufanele uchebe njani? | Amadoda aQinisekileyo
UPaco Maria Garcia | | Chetyiwe, yokuPhila
Kutshanje siye safumana ukuzalwa kwakhona kweendevu njengokunxiba ebusweni. Phantse wonke umntu unxiba iintlobo ezahlukeneyo, ibhokhwe, iindiza… Njl. Into emele yaziwe kukuba luhlobo luni lweendevu olusilungele kakhulu ngohlobo lwethu lobuso, ayizizo zonke eziphucula umfanekiso wethu.
Ngeendevu sinokulungisa izinto ezininzi, ukusuka kwi-oval yobuso bethu, ukufezekisa ubuso ngokuvisisana okukhulu. Kuya kufuneka ukhethe imeko yokuwa kwakho kwaye ukhethe iindevu ezinqumlayo ezikulungeleyo.
1 Loluphi uhlobo lweendevu olulungele ubuso bakho?
2 Ubuso obude
3 Ubuso besikwere
4 Ubuso obujikelezileyo
5 Ubuso bomgubo
6 Ubuso obunxantathu
7 Ubuso bedayimane
8 Ukuba unesilevu esiphindwe kabini ...
Loluphi uhlobo lweendevu olulungele ubuso bakho?
UPhilips QP2520 / 30 ...
Isilungisi seenwele zeBraun
UPhilips MG7720 / 15 ...
Zininzi izizathu zokuthwala intshebe. Kungenxa yokuba kuphakathi kweendlela zamva nje, kuba silandela umzekelo womntu odumileyo, kuba uyasithanda, njl. Kodwa yeyiphi iindevu eyona ilungele thina ngokuxhomekeke kuhlobo lobuso esinabo?
Iindevu zi ithathelwe ingqalelo njengenye yezona zinto zincedisayo kubugcisa babantu. Iindevu zazo zonke iimodeli zibonwa. Nokuba le ndevu iguqukile kwicandelo leemveliso zokhathalelo: iibrashi, i-waxes enika ubume obunqwenelekayo, into yokuthambisa iindevu, iibrashi zomphumo oqaqambileyo, njl.
Ubuso obuhlangeneyo zezi ezona ziethe-ethe zokukhulisa iindevu. Kuyimfuneko ukunqanda ukuba ubuso bunefuthe lokwandiswa okungaphezulu. Uhlobo lweendevu ekufuneka lusetyenziswe kwezi meko lolu iindevu ezimfutshane ezinamacala ashinyeneyo. Ngale ndlela, ubuso buya kubonakala bungaphantsi kwaye bunemilo ethe chatha.
Isitshixo ngaphakathi yenza uhlobo lwecrescent ebusweni, ethambisa umphumo wobuso obudibeneyo kancinci.
Ukuba unayo ubuso obude ukhetha ukuyisika kakuhle kwaye ungaze ubone ngezantsi komhlathi, Oku kuya kubangela ukuba ubuso bakho bude ngakumbi. Iindevu zakho kufuneka zibe mfutshane kwindawo yesilevu kwaye zibanzi kwi-sideburns zenze i-crescent eyenza ukuba ubuso bungabonakali bude.
Le yimeko yabadlali abanjengoGeorge Clooney okanye uBrad Pitt abathi, benolu hlobo lobuso, baqondise iindevu zabo ngale ndlela.
Ubuso besikwere babonakaliswa ibunzi elibanzi, izidlele eziphakamileyo, kunye nesilevu esingancami kakhulu. Ibhokhwe ihlala iyeyona ilungileyo ukuze ubuso bube bude ngakumbi kunye nefuthe lesitayile.
Njani yiba yibhokhwe? Kunye iinwele ezingaphezulu kwindawo yesilevu kwaye kancinci kumacalas. Nkqu amacala anokucheba ngokupheleleyo.
Ezi knob zigcinwa ngokululaUsebenzisa umatshini wombane olula, awude ufune ukucheba ukuze ujongeke kakuhle.
El Ubuso besikwere yenye yezona zixhaphakileyo. Ihlala inxulunyaniswa nebunzi elibanzi, i-cheekbones ebhengeziweyo kwaye ingekude kakhulu kodwa ichazwe kakuhle. Iindevu zebhokhwe zilulungele olu hlobo lobuso, zandisa isilevu ukuze le ndawo ibe yeyona ndawo inomdla kuyo. Ungakulibali ukusika iindevu emacaleni ngobume obujikeleziweyo ukuze uthambise ujikelezo lobuso.
Un Ubuso obujikelezileyo Iphawulwa ngokuba ne-cheekbones encinci kunye nezihlathi. Kuyacetyiswa ukuba unxibe ngakumbi iindevu emboxo eguqula ukujikeleza kobuso, kwaye iyenze ibe nde. Yinqumle kubude ezidleleni.
Los izidlele ezidumbileyo nezidlele kunye nesilevu esincinci yenza imvakalelo yokuba ubuso babufutshane. Kubalulekile, kolu hlobo lobuso, ukuba iindevu zi-angular, ichaza umhlathi kancinci ngakumbi kwaye yenze ulwazelelelo lobude. Ukuba ikho nayo isilevu esiphindwe kabini, eyona nto iphumeleleyo kukuba iinwele zikhula phantsi kwesilevu, kwicala lentamo.
Ukuba Ubuso luhlobo lwe-oval, olona phawu lubalulekileyo kukuba amanqaku ajikeleziwe. Obu buso bobona bugcina ubungakanani phakathi kwezidlele, isilevu nebunzi. Kucingwa njengobuso obufanelekileyo.
Kule ndlela yobuso, Iindevu zihlala zilingana kakuhle. Inokuba yeyona ibhokhwe idibanayo, kwaye inentshebe engaphawulwanga kakhulu ebusweni.
Kungenzeka ukuba imvakalelo yokumisa ubuso ujikeleze kakhulu Inxalenye ethile yayifihliwe ziindevu.
Obu buso, nge Imibala ekhumbuza unxantathu, zibonakaliswa ziimpawu eziphawuliweyo kunye nesilevu esinde kakhulu.
Kolu hlobo lobuso, uhlobo lweendevu ezinokulingana ngokuchanekileyo yonke iindevu, eya kuthi incede ukuguqula imvakalelo yokuqaqadeka kancinci eziphawula obu buso.
Iindevu inokukhula ixesha elide emacaleni kwaye imfutshane kancinci kwindawo yesilevu, ngokuchasene noko kwenzekileyo kwimizekelo yangaphambili.
Kwezi meko kunjalo Kucetyiswa ukuba iindevu zinakekelwe kakuhle, ukuze ibhalwe uphawu ebusweni kwaye ingakhuli ngaphaya kwesilevu. Isitayela "seentsuku ezininzi zeendevu" sinokuba sesona silungileyo.
Ngamanye amaxesha ubuso bedayimane budidekile nobunxantathu kunye nesikwere. Ngokwenyani, ukuba sijonga ngokusondeleyo, kwahluka ngokuba banzi kwindawo yesidlele kunasentla kwentloko okanye esilevini.
Ezona ntshebe zibalaseleyo kolu hlobo lobuso zihlala zihlala ibhokhwe enesiphumo somlomo. Kukho ukhetho lokunxiba iindevu kunye neendevu, ezantsi komlomo ongezantsi. Olu jongo lwenziwe lwathandwa nguJohny Deep.
Ukuba unesilevu esiphindwe kabini ...
Kulabo abane-chin ephindwe kabini eyona ilungileyo yindevu epheleleyo, eya kuthi icokise ubuso ngokubanzi kwaye igubungele isilevu esiphindiweyo uqobo. Yenza intshebe ibenamacala, iphele kanye emgceni wesilevu ngaphandle kokuya entanyeni.
Kodwa ikwabalulekile, Ukuba awuthandi ukunxiba iindevu, jonga ukubuyela ecaleni kwakho. Ukuba ubuso bakho bunqabile, khetha itempile emfutshane, ukuba ityebile, shiya itempile ixesha elide ukuba uzobe umgca womhlathi.
Ezi ngcebiso zinokukunceda ngotshintsho kwinkangeleko.
Ngoku kufuneka ukhethe wena, iindevu ewe okanye hayi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Chetyiwe » Uhlobo lweendevu ngokobuso bakho
ziphi iindevu ezimbi
URicardo "DjGomita" uGarcía Paredes sitsho
Ndineentshebe ezingalinganiyo, iindevu zam azivali U. U. Kwaye ndingavuya kakhulu nge-French Fork ndevu> w
Phendula uRicardo "DjGomita" García Paredes
Ewe ndizamile phantse zonke ezikolu luhlu ngaphandle kwe-hulihee xD, ngelishwa ndifumana iindevu ezininzi kunye neenwele ezincinci entlokweni yam.
UHugh Jackgman noJustin Timberlake banobuso obungqukuva ????
Abaqeqeshi ukuxhasa ikhabethe lakho entwasahlobo
Iingcebiso zokunxiba isuti